झाँक्रीको एक ‘स्टाटस’ ले माधव नेपाल समूहमा तरङ्ग ! – Everest Dainik – News from Nepal
झाँक्रीको एक ‘स्टाटस’ ले माधव नेपाल समूहमा तरङ्ग !
काठमाडौं, असोज १७ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की नेतृ तथा सांसद रामकुमारी झाँक्रीले गुटमा नबस्ने घोषणा गरेकी छिन् ।
प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड बिदेशमा रहेको बेला बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सरकारबिरुद्ध अभि व्यक्ति दिनुका साथै स्थायी समिति सदस्यहरुको भेला बोलाएपछि दुई ध्रुवमा केन्द्रित भएको बेला चर्चित नेतृ झाँक्रीले नेता नेपाललाई नै ‘काउन्टर’ गर्दै अब आफु कुनै गुटमा नलाग्ने घोषणा गरेकी हुन् ।
‘मलाई न उनको शैली मन पर्छ न यिनको तरीका मन पर्छ। बीचमा बस्न पाइदैन ? बुस सिद्धान्त नलगाउ न साथीहरू ।,’ झाँक्रीले गुटबन्दी नगर्न सुझाव दिँदै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेखेकी छन् । बरिष्ठ नेता नेपाल निकट मानिने नेतृ झाँक्रीले गुटमा नबस्ने घोषणा गरेसँगै माधव नेपाल समूहमा तरङ्ग आएको छ ।
यसअघि बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले आवश्यक परे गुट बनाउने बताएका थिए । पूर्वनेकपा एमाले र पूर्वनेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भई नेकपा बनेसँगै दुवै पार्टीका तात्कालिन गुट उपगुटहरु आफू बलियो बन्ने होडमा छन् ।
ट्याग्स: Ramkumari Jhakri
औद्योगिकरण मुख्य प्राथमिकतामाः मन्त्री भट्ट
‘लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्छौं’
कस्तो छ तीन दिनसम्मको मौसम पूर्वानुमान ?
काठमाडौंमा पानी पर्‍यो, चन्द्रागिरिलाई हिउँले ढाक्यो
सुदूरपश्चिममा हिमपात, बाटो अवरुद्ध
बोरिस जोनसनलाई यूकेमा विशाल बहुमत, के बन्लान प्रधानमन्त्री ?
पिकनिक जाँदै गरेको मदन भण्डारी कलेजको बस दुर्घटना, २२ जना घाइते
आइपीएलमा हालसम्म को–को लिएका छन् ह्याट्रिक विकेट? (सूचीसहित)